कथाकार वियस राईद्वारा लिखित हिउँमाझी कथा संग्रह माथी साहित्य विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न « Sajha Page
कथाकार वियस राईद्वारा लिखित हिउँमाझी कथा संग्रह माथी साहित्य विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न
प्रकाशित मिति: April 27, 2019
– सन्जय याख्खा
धरान । कथाकार वियस राईद्वारा लिखित हिउँमाझी कथा संग्रह माथी साहित्य विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गत मङ्सिरमा विमोचन गरीएको उक्त कृति बियस राईको पहिलो कृति हो । नेपाली साहित्य जगतमा आख्यानकार बियसले हिउँमाझी कथा संग्रहद्वारा पाइला राखेका हुन । उनको यो पहिलो कृतिले नै लेखक बियसलाई चर्चाको शिखरमा पूर्याएको हो । हाल काठमाण्डौ मण्डला थीएटरमा हिउँमाझी कथा संग्रहमा संग्रहित कथा जोख़ाना लाई नाट्य रूपान्तरण गरी नाटक भब्य मञ्चन भै रहेको छ ।
धरान-१८, बुद्ध चौक स्थित बिमल स्मृति पुस्तकालयको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रमलाई कन्फ़्यूजनेपाल डट कम मीडिया हाउसले आयोजना गरेको थियो । त्यसै गरेर उक्त कार्यक्रम नेपाली भाषा तथा सांस्कृतिक अनुसंधान केन्द्रको सहकार्य रहेको थीयो ।
कार्यक्रममा कथा संग्रह माथी प्रा.डा. टंक प्रसाद न्यौपाने, सहप्राध्यापक सागर मणि सुबेदी र सहप्राध्यापक राजेश बिद्रोहीले विमर्श गर्नु भएको थीयो । त्यसै क्रममा उक्त कृतिका लेखक तथा आख्यानकार बियस राईले पनी कृतिको बारेमा प्रस्ट्याका थीए ।
हिऊमाझी कथा पढ़ीरहदा म हिमाल चढ़ीरहेको थीए । जीवनमा हिमाली क्षेत्र घुम्ने मौक़ा नमिलेको मलाई यही कथा संग्रहले घुमाएयो । यहाँ हरेक कथाले फ़िनीसीङ पोईन्टमा बलियो सन्देश प्रवाह गरेको छ त्यस्तै सामाजिक बिसंगतीका कुरा र सामाजिक अनुसंधानको बिषय एकदम मज़बूत ढंगले प्रस्तुत गरेको छ कथाहरूले । यो बिल्कुल नेपाली साहित्यमा नया प्रयोग देखीएको छ । हिउँमाझी कथा संग्रह कुनै कृति सँग तुलना गर्नु पर्दैन । बियसको पहिलो कृति भए ता पनी यो वहाँको धेरै कृति पश्चात आएको खारीएको कृति हो । कार्यक्रममा बक्ताका रूपमा उपस्थित सागर मणि सुबेदीले बताए ।
सहप्राध्यापक तथा कार्यक्रमका बक्ता राजेश बिद्रोहीले पनी यदि पर्यटन ब्यवसायहरूले यो कृति पढ़े राम्रो गाइडलाइन पाउने र ब्यवसायलाई धेरै सहयोग पुग्ने सामग्रीको रूपमा हीउँमाझी कथा संग्रहलाइ देखे । म पनी सगरमाथा चढ़े । सगरमाथा चढनु भन्ने कुरा सुन्नु ज़ती सजिलो छ सगरमाथा चढनु उति नै गाह्रो रहेछ कथा पढ़ीरहदा म पनी सगरमाथा चढ़े । त्यसै गरेर हिउँमाझीले हिमालको परिवेशलाई मात्र नभएर हाम्रो सामाजिक संस्कार संस्कृतिको बारेमा पनी निकै मज्जाले प्रस्तुत गरेको देखे । मैले एक बसाईमै पढ़ेर सके । हिउँमाझी फलानो कृति ज़स्तो हैन यो हिउँमाझी कृति जस्तै रहेको छ ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रा.डा. टंक प्रसाद न्यौपानेले पनी हीउँमाझी शीर्षक सुन्दै पढौ लाग्ने पढनु थालेपछी रोकीनु मन नलाग्ने । कथामा भेंटीएका त्रुटि पनी कथाकारको लेखन जादुले लुकाइदिएको छ । पठनयोग्य कृति रहेको छ । कार्यक्रममा बक्ताहरू र स्रस्टालाई मायाको चिनो वितरण गर्दै कार्यक्रम अन्त्य गरीएको थीयो ।